२०७५ सालका मुख्य बैंकिंग घटनाहरु - Arthapage
२०७५ सालका मुख्य बैंकिंग घटनाहरु
प्रकाशित मितिः २८ चैत्र २०७५, बिहीबार ०७:१५ April 11, 2019
वि.सं. २०७५ सालमा बैंकिङ क्षेत्रले निरन्तर रुपमा तरलता समस्याको सामना गर्नु पर्यो । प्रविधिको विकासका हिसाबले भने बैंकिङ क्षेत्र निकै उपलब्धिमूलक बन्यो । साथमा प्रविधिको दुरुपयोगका घटनाहरु पनि आए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धि कतिपय नीति नियमहरु परिमार्जित पनि भए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा धेरै नीतिगत परिवर्तनहरु गर्यो । समग्रमा, २०७५ सालका चर्चित केही बैंकिङ खबरहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छः
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेका परिमार्जनहरु :
व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन बजार व्यादरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न व्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. ७५ लाखबाट रु. ५० लाख कायम गरिदियो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।
मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको समस्याका कारण बैंकहरुमा व्याजदरको प्रतिस्पर्धा चर्को रुपमा अगाडी आएको थियो । बैंकर्स संघले एक वर्ष पहिलेबाट गरेको व्याजदरको भद्र सहमति हटाएसँगै बैंकहरुमा व्याजदर वृद्धिको चर्को प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो । तर सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टिका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको साहसिक कदमले गर्दा बैंकहरुले व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपमा अधिकतम ९.५ प्रतिशत तथा बचतमा अधिकतम ६.५ प्रतिशत व्याजदर कायम गरेका छन् । त्यस्तै, विकास बैंकहरुले मुद्धतिमा १० प्रतिशत तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले मुद्धति निक्षेपमा अधिकतम १०.२५ प्रतिशत सम्म व्याज दिने निर्णय गरेका छन् ।
अन्र्तराष्ट्रिय मुद्धा कोषले (आईएमएफ) नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम मोलेको विश्लेषण गरेको छ । बैंकहरुले आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गरेको र यसरी आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम अवस्था आउन सक्ने आईएमएफको विश्लेषण छ । यसरी आक्रमक रुपमा लगानी विस्तार गर्दा पनि नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा नबढेकोमा आईएमएफले अश्चार्य प्रकट पनि गरको छ ।
नेपालमा पुँजी बजार र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न भन्दै अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले सरोकारवालाहरु संग छलफल गरी आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाईसकेको छ ।
कतारको दोहा बैंकले नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले काठमाडौंको थापाथलीमा कार्यालय खोलेर काम सुरू गरिसकेको छ । यो दोहा बैंकको शाखा नभई सम्पर्क कार्यालय मात्रै भएकाले प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक कारोबार भने गर्ने छैन । सो कार्यालयले यहाँका बैंकहरुलाई दोहा बैंकका शाखा कार्यालयसँग जोड्न सहजकर्ताको रुपमा काम गर्नेछ । नेपालका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुसँग यस कार्यालयले व्यवस्थापकीय सम्वन्ध विस्तार गर्ने काम गरिरहेको छ । नेपालका बैंकहरु यस कार्यालयमा जोडिएपछि दोहा बैंकका जुनसुकै शाखा कार्यालयसँग नेपालका बैंकले एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) को काम गर्न पाउने छन् । अर्थात, एलसी एड्भाइजरको रुपमा रहेर कार्यालयले सेवा दिने छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय बैंकिङ घटनाहरुमा आईएमएफले देशको केन्द्रिय बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको समाचार लगायत भारतिय रिजर्व बैंकका गभर्नर उर्जित पटलको राजीनामा, डलरको मुल्यमा निरन्तर वृद्धि तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केन्द्रिय बैंकको अध्यक्षलाई बर्खास्त गरेको लगायतका विषय वि.सं. २०७५ मा चर्चित रहे ।
व्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
वाणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ । व्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत व्याजदरका आधारमा व्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस बैंकमा रहेको पुर्नकर्जा कोषको सीमा ५० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । साथै, पुर्नकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा यस बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुर्नकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल यस्तो कर्जामा ४.५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । बैंकिंग खबरबाट
प्रकाशित मितिः २८ चैत्र २०७५, बिहीबार ०७:१५ |
Prevनिर्दयी तरिकाले बसको डिग्गीमा कोचेर राख्दा ५ वटा खसी मरे, व्यापारी र चालकलाई कारवाही
Nextमानसरोवर पार्क एण्ड रिर्सोटले माग्यो झण्डै डेढ सय कर्मचारी,रोजगारीको अवसर